About Us - Jinhua Raaxada Vehicle Co., Ltd
mooto laad Electric
Electric Mobiliy mooto
Fat Turos E-baaskiil
700C E-baaskiil Yurub
qaybaha kale firaaqada & accessories
JINHUA raaxada VEHICLE.CO., LTD Company waa a Waad ku kalsoonaan kartaa oo waxaa ku yaalla Jinhua, Gobolka Zhejiang, Shiinaha, taas oo saleysa gool ay gaadiidka cagaaran iyo awood-badbaadin ah iyo dadka sidaas ku siin dareen caafimaad leh iyo raaxo kortaan. Shirkadda waxaa inta badan sameeyo iyo iibiyo noocyada kala duwan ee e-Baaskiilada, mootooyinka dhaqdhaqaaqa, kursiga curyaamiinta ee korontada iwm
ku salaysan our horumarka & wax soo saarka awoodda, nidaamka tayada adag, iyo waayo-aragnimada hodanka ku ah dhoofinta suuqyada kala duwan. Waan ognahay sida ay u bixiyaan wax soo saarka wanaagsan iyo adeegga wanaagsan ee waarido iyo distributors adduunka oo dhan. OEM / ODM iyo qaar ka mid ah adeeg ahaanayta waa la heli karaa. Oo annaguna waxaannu sidoo kale ku siin kara talo muhiimka ah macaamiisha cusub haddii loo baahdo.
JINHUA raaxada VEHICLE.CO., LTD waxaa had iyo jeer raadinaya ganacsatada cusub meel kasta oo adduunka ah aad tahay. Iyada oo Shahaadda ah EN15194, CE, UL, ROHS heli karo in aad soo dhoofsadaan si fudud in Europe ama meel kasta oo aad tahay.
JINHUA raaxada VEHICLE.CO., LTD idin soo dhowayn oo leh shaqaale takhasus sare leh, oo dhan leh waayo-aragnimo qani ah oo duurka ku ah baaskiilada korontada iyo mootooyinka Mobility.
wadada huatai No.588, magaalada jinhua, Zhejiang